Efere Ice Machine Manufacturers - China efere Ice Machine Suppliers & Factory
Flake Igwe igwe
Igwe Igwe Tuba
Gbochie Igwe Igwe
Igwe Igwe Ice slurry
Nchekwa Ice Akpaaka
Akụrụngwa na-enyefe Ice
Akụrụngwa Ice Ice
Igwe Igwe Akpa
Ileba anya oru
Tubọọ Ice Ice Evaporator
Pneumatic erute usoro
Efere Ice Evaporator
Efere ice evaporator tumadi ịdaba abụọ dị iche iche, ya bụ, aluminum alloy na igwe anaghị agba nchara Evaporator. Efere ice evaporator adopts kpọmkwem mgbasa usoro na R22, R507A, R404A ma ọ bụ amonia (R717) dị ka jụrụ ajụ.
Snowman bụ onye na-emepụta igwe eji ebu efere na soplaya. N'ikwekọ n'ụkpụrụ Haccp na FDA, igwe igwe akụrụngwa anyị dabara adaba maka nhazi na nchekwa nri. Ọ bụ a obere ma ukwuu-oru oma igwe gị ice jụrụ mkpa.
Anyị efere ice onye kachasị na alloy na patent nhazi technology. Ọ bụ nke ukwuu okpomọkụ-eduzi. Ọ baghị uru maka ikpokwu ọkụ, igwe na-eme ice a na-eji gas fluorine emepụtara onwe ya iji wepu ice ahụ, na-arụ ọrụ nke ọma na ike nchekwa.